Mawiricheya muLake Wales, FL | KarmanHealthcare.com
Iri peji rine ruzivo maererano ne [peji_title] Kuwanikwa uye rumwe ruzivo rwunoenderana. Iwe unogona kudzvanya aya maratidziro kuti ushanyire zvikamu zvakatarwa pane ino peji rezvinyorwa.
Vakaremara Mabasa muFlorida
Florida State Mapaki
Akaremara Ruzivo rweVashanyi
Disney World Ruzivo Rwehurema
Universal Orlando uye Seaworld Orlando
Midziyo uye Mota Dzimba
Iyo Florida Keys uye Keywest Akaremara Ruzivo
[peji_title] Dealer Locator uye Shopping Online
Isu tinopa ruzivo pa wiricheya kupinda mu [peji_title], mudunhu reFlorida, izvi zvinosanganisira Kuremara Mabasa muFlorida, Florida State Parks, Akaremara Ruzivo rweVashanyi, Disney Nyika Kuremara Ruzivo, Universal Orlando uye Seaworld Orlando, Midziyo uye Mota Rentals, Iyo Florida Keys uye Keywest Kuremara Ruzivo nedzimwe nzira dzekufamba dzinokubatsira nerwendo rwako rwekuFlorida, kana kana iwe uri mugari wenzvimbo ye [peji_title].
Karman Healthcare inopa vashandisi vasina huremu mavhiripu uye zvekurapa mu [peji_musoro] nedzimwe nzvimbo dzakatenderedza. Tine nzvimbo zhinji dzechitoro dzepamutemo mukati meNew York dzinogona kukupa iwe kufamba zvishandiso nebasa.
Kana iwe uchida kutsvaga mutengesi weKarman Healthcare mu [peji_title], ndokumbira ushanyire peji redu reDealer Locator pawebhusaiti yedu, kuti uwane mutengesi ari padyo newe padyo, zvichienderana nenzvimbo yaunogara, unogona kuwana chitoro izvo zvinokubatsira iwe kuwana icho chakakodzera chidimbu chemidziyo yehupenyu hwako uye zvaunoda.
Isu tinopawo zvekushandisa zvekurapa kuburikidza nevatengesi vedu vepamhepo, unogona kuwana zvimwe nekudzvanya pane "Shop Online" izvozvi bhatani riri pazasi peiyi ndima. Kana iwe uchida kutsvaga rumwe ruzivo nezve chero zvigadzirwa zvedu, kusanganisira zvisingaremi mavhiripu, ndapota shanyira chimwe chezvikamu zvedu zvakawanda zvinosanganisira mhando dzakasiyana dzemidziyo yekurapa ine akasiyana maficha uye maitiro.
[peji_title] [hr] Kuremara Mubatsiri Webasa Florida County Zvinyorwa
Northwest Florida: Bay, Calhoun, Escambia, Franklin, Gulf, Gadsden, Hamilton, Holmes, Jackson, Lafayette, Liberty, Leon, Jefferson, Madison, Okaloosa, Santa Rosa, Suwannee, Taylor, Walton, Wakulla, Washington
North Central Florida: Alachua, Citrus, Dixie, Gilchrist, Levy, Marion
Northeast Florida: Baker, Bradford, Columbia, Duval, Flagler, Nassau, Putnam, St.John, Union, Volusia
East Coast: Brevard, Indian River, Martin, St. Lucie, Seminole
Gulf Coast Florida: Hernando, Hillsborough, Manatee, Pasco, Pinellas, Sarasota
Central Florida: Desoto, Hardee, Highlands, Lake, Polk, orenji, Osceola, Okeechobee, Sumter
Maodzanyemba akadziva kumadokero Florida: Charlotte, Collier, Glades, Hendry, Lee
Maodzanyemba Florida: Broward, Miami-Dade, Monroe, Palm Beach
[peji_title] [hr] Florida State Mapaki
Florida's State Parks yakazvipira kupa kufambidzana zvivakwa, zviitiko uye zvirongwa kune vese vashanyi. Nezve zviyero uye zvirevo maererano nekushandiswa kwe mavhiripu, zvine simba-zvine simba kufamba aids uye nezvimwe zvinofambiswa nesimba kufamba zvishandiso (OPDMD) nevanhu vane kufamba kukanganiswa mukati memapaki ehurumende, ndapota tinya pane yakakodzera chinongedzo pazasi, kana kupuruzira pasi kuchikamu chakakodzera. Kuti uwane yekuwedzera nzira kumigwagwa nemabhishi, ese-terrain mavhiripu, kusanganisira kumahombekombe mavhiripu inowanikwa mumapaki mudunhu rese. hwiricheya malifti anopihwa kuBoca Grande Lighthouse kuGasparilla Island State Park uye Eden Gardens State Park. Vaturikiri vemutauro wemasaini vanogona kupihwa ziviso yepamusoro kushandisa Fomu Rokukumbira Pokugara. Uye zvakare, mapaki mazhinji ane mapurogiramu evhidhiyo anopa vhezheni-yakavhurika vhezheni pamwe nemakopi akanyorwa emapurogiramu eodhiyo.
Mawiricheya, Manually-Powered Mobility Aids uye Mamwe Simba-Anotyairwa Anofamba Midziyo (OPDMD)
Inowanikwa yeFishing Piers
Inowanikwa Boat Tours
mavhiripu, NESIMBA-NESIMBA kufamba AIDS NEMWE SIMBA-RINODHONZWA kufamba ZVIDZIDZO (OPDMD)
mavhiripu uye Nemaoko-Inowanikwa kufamba Aids inobvumidzwa chero kupi kwetsoka traffic inobvumidzwa.
Imwe Simba-Inotyairwa kufamba Midziyo (OPDMD) inobvumidzwa CHETE KUSHANDISWA NEVANHU VANE kufamba ZVAKAIPA uye zvinowanzo tevera zvinotevera zvirevo zvakaringana kuitira kuti zvionekwe sekugamuchirwa kuti zvishandiswe muFlorida State Parks:
havukavu - Iyo yekumhanyisa kumhanya uchiri muFlorida State Park ichave iyo yemhando yekumhanya yekumhanyisa, zvichibva parudzi rwevhu nevhu zviripo zvezvakatipoteredza mamiriro, kwete kupfuura mamaira mashanu paawa.
upamhi - Hupamhi hahufanirwe kupfuura 34 inches. Dzimwe nzira dzevanofamba netsoka, nzira uye nzvimbo dzisina kuvandudzwa dzinogona kudzikisira hupamhi hunogamuchirwa sezvo hupamhi huchisiyana zvakanyanya kumatunhu aya nekuda kwenzvimbo dzechisikigo kana nharaunda dzetsika.
urefu - Kureba kwacho hakufanirwe kupfuura 62 inches. Dzimwe nzira dzevanofamba netsoka, nzira uye nzvimbo dzisina kuvandudzwa dzinogona kusatsigira hurefu hwezvimwe zvigadzirwa nekuda kwenzvimbo dzechisikigo kana nharaunda dzetsika.
uremu - Kurema kwechigadzirwa hakufanirwe kupfuura mapaundi mazana mashanu nemakumi mashanu. Dzimwe nzira dzevanofamba netsoka, nzira uye nzvimbo dzisina kuvandudzwa dzinogona kusatsigira huremu hwezvimwe zvigadzirwa nekuda kwenzvimbo dzechisikigo kana nharaunda dzetsika.
mhando - Rudzi rwacho haruwanzo sanganisira chero mota ine mota kubva-mugwagwa mukuru wakagadzirirwa kufamba pamatai asiri emigwagwa mikuru uye / kana kuva nechigaro chakagadzirirwa kutenderedzwa neanoshanda uye / kana mabharanzi ekutungamira, senge dzese-nzvimbo mota (maAVV ), off-highway midhudhudhu (OHMs) uye yekuvaraidza off-highway mota (ROV). ONA: Mota dzinotakurwa negasi, zvisinei nemhando ipi, hadziwanzo bvumidzwa mune chero zvivakwa zvakapoteredzwa nemadziro uye / kana zvakafukidzwa nedenga.
*** CHINANGWA CHINOKOSHA ***
NDINOFUNGA KUSHANYA USATI WAENDA. Zvinokurudzirwa zvikuru kuti ubate Paki nguva isati yasvika yekushanya kwako kuti uve nechokwadi chekuti OPDMD yako inobvumidzwa kuti ishandiswe mune izvo zvinhu (s) uye panguva chaiyo (iwe) yaunofunga kuishandisa.
Beach mavhiripu zvinowanikwa neepamberi chiziviso mumapaki anotevera.
Huru Lagoon State Park
St.Peninsula State Park
Topsail Chikomo Chekuchengetedza State Park
Edward Bhora Wakulla Zvitubu State Park
Dudley Farm Nhoroondo State Park
Mudiki Talbot Island State Park
Gamble Rogers Memorial State Nharaunda Yezororo paFlagler Beach
Maodzanyemba akadziva kumadokero Florida
Fort Foster State Park
Hillsborough Rwizi State Park
Vanoda Key State Park
Skyway Kubata hove State State Park
Bill Mabhegi Cape Florida State Park
Oleta Rwizi State Park
St. Lucie Inlet Chengetedza
Yakareba Key State Park
kufambidzana MAPAYA OKUREDZA
Fanning Zvitubu State Park
Manatee Zvitubu State Park
Gungwa reGriffin State Park
Gungwa Kissimmee State Park
Myakka Rwizi State Park
Iyo Skyway Fishing Pier State Park
Gungwa Manatee State Park
Blackwater Heritage Trail State Park
Tallahassee-St. Marks Nhoroondo Yezvitima Njanji Trail State Park
Gainesville- Hawthorne State Trail
Zvisikwa Coast Coast Trail State Park
Jenerali James A. Van Fleet Trail State Park
Oscar-Scherer Nyika Park
kufambidzana BHUKU RINOSHANYA
Homosassa Zvitubu Wildlife State Park
Ruzivo rwunopihwa floridastateparks.org
[hr] [peji_title] Akaremara Ruzivo rweVashanyi
Senyika yepamusoro yekuenda, Florida ine zviwanikwa zvakawandisa kune vafambi vane zvidikanwi.
Sosaiti ye kufambidzana Kufamba & Kugamuchira Vaeni, kana SATH, inopa kurudziro yevamiriri vekufamba uye zvimwe zviwanikwa kubatsira vafambi vakaremara kuronga zororo ravo. 561-451-0052, www.sath.org
Able Trust inopa zvinongedzo zvinobatsira ku Kuremara zviwanikwa mudunhu rese kubva kuFlorida Gavhuna Mubatanidzwa weIye Kushanda kwevagari vemo vane hurema. 850-224-4493, www.abletrust.org
Florida Akaremara Outdoors Association inopa zviwanikwa pa Akaremara kufamba kwekunze mune [peji_title].www.neropa.org
American Diabetes Association inopa ruzivo rwekufamba nechirwere cheshuga, pamwe nerondedzero yezvipatara zvinopa rubatsiro kune vanofamba neshuga. 800-342-2383, www.diabetes.org
Dialysis Tsvaga yewebhu webhusaiti inonyora nzvimbo nzvimbo uye mepu ne zip kodhi. 866-889-6019, www.dialysisfinder.com
Scooter /hwiricheya Rental
Kuchengeta Mushonga Midziyo, Orlando: hwiricheya uye kukwereta scooter, oxygen, mimwe michina yekurapa. 800-741-2282, 407-856-2273, www.caremedicalequipment.com
Scootaround Inc.: Inowanikwa mumaguta zana nemakumi maviri [peji_title]. 120-888-441, www.scootaround.com
Bhurawuza yedu mushanyi ruzivo rwekushambadzira kwenzvimbo dzinopa kumahombekombe mavhiripu uye mamwe masevhisi kana ruzivo rweavo vakaomeswa mumuviri. Kusiyana neyakajairika mavhiripu, aya “mavhiri emahombekombe” ane matai akakosha asinganamirwe mujecha. Macheya emahombekombe anowanzo kupihwa pasina muripo uye anowanikwa kune chero munhu asingakwanise kufamba kana avo vane vakaremara mota tag.
kufambidzana Kubhadhara Mota
Mazhinji makambani makuru ekubhadhara mota anosanganisira Hertz uye Dollar Rent A Mota, anogona, nekufanozivisa, kupa mota-dzinodzora maoko.
kufambidzana Mota dzeAmerica:
Miami nzvimbo (Sunset kufamba), 800-240-9246, www.sunsetmobility.com
Maodzanyemba akadziva kumadokero kweFlorida nzvimbo: Fort Myers 239-936-6333, .www.oceanconversions.com
Inowanikwa muOrlando, Bradenton, Sarasota, Tampa, St. Petersburg, Daytona Beach neMelbourne, 800-242-4990
Fort Lauderdale, Miami, West Palm Beach, Pensacola, Jacksonville, Fort Myers neNaples, 800-637-7577; www.wheelchairgetaways.com
Akaremara Kupaka Mvumo
Chikamu 316.1958 Florida Statutes inopa kuti mota dzinoratidza rezinesi ndiro kana kupaka mvumo yakapihwa kune Akaremara munhu nechero imwe nyika kana dunhu zvichiteerana nemitemo yeUnited States ichazivikanwa seyakavimbika ndiro kana mvumo. Ruzivo rwuri pa www.hsmv.state.fl.us/dmv/disabled_pkg.html
Vafambi vekune dzimwe nyika vane mvumo yekupaka munyika yavo vanogona kutenga mvumo yenguva pfupi kubva kune chero yemahofisi emutero emuno madhora gumi nemashanu. Ruzivo pa floridataxcollectors.com.
ruzivo rwakapihwa na visitflorida.com
Disney World Kuremara ruzivo
Disney inowana zvakanyanya akakwira mamaki kubva kune vashanyi vane hurema. Mune fashoni yechokwadi yeDisney, ivo vanoteerera zvakanyanya kune ruzivo rwunozoita kuti vanhu vane zvidikanwi zvidikanike vagadzikane.
Heano maidi, nhungamiro, uye mashoma matipi eiyo Akaremara muenzi:
Kupaka kwakasarudzika kunowanikwa kune vashanyi kumahara mana epaki theme uye ese maDisney World Resort mahotera. Kumbira nzira kune masuo.
Valet yokupaka inowanikwa kuDowntown Disney uye yakasununguka kune vashanyi vane hurema.
WDW Monorail zviteshi zviri kufambidzana to mavhiripu.
Kuwanika kuMagic Kingdom kunowanikwa nechikepe kana monorail.
mavhiripu zvinowanikwa munzvimbo dzese dzemapaki. Mari inoita $ 12.00 pazuva ($ 10.00 pazuva kwehurefu-hwekugara-dzimba).
Magetsi Dzinobatsira Mota dziripo kuti dzibhadharwe. Mutengo i $ 50.00, pamwe ne $ 20.00 inodzoserwa dhipoziti, paki, pazuva.
Tarisa bhuku reDisney reVashanyi vane Kuremara kuti uwane ruzivo nezve hwiricheya kuwana zvinokwezva, kana kutarisa neanotasva muenzi kana muenzi. Zvakawanda zvinokwezva ndizvo kufambidzana kune vashanyi vanogona kusimudzwa kubva kumacheya nerubatsiro kubva kunhengo yepati yavo. Vazhinji vanogona kugashira vaenzi vanofanirwa kugara mukati mavo mavhiripu.
Disney inobvumira mhuka dzinotungamira kukwira pane zvimwe zvinokwezva.
Yakatemwa "nzvimbo dzekuzorora kwemhuka" inowanikwa mumapaki ese, uye paki yega yega ine vashandi vanowanikwa kuti vakubatsire nemhuka yako.
Mahotera ese eWDW ane pekugara kune vashanyi vakaremara, kusanganisira roll-in showers uye "zero-kupinda" madziva ane akakosha mavhiripu inowanikwa. Ive neshuwa yekukumbira kune Special Reservations department.
[peji_title] Akaremara Ekuona
Tepi rekodha nekaseti inotsanangura paki imwe neimwe inowanikwa pamadhora $ 25.00 inodzoserwa. Zvakare, bhuku reBraille rinotungamira rinowanikwa kune $ 25.00 dhipoziti inodzoserwa.
[peji_title] Kuremara Kunzwa
Bhadhara mafoni ane mameseji typewriters (TTYs) anowanikwa mukati meWDW.
Mutauro wemasaini unowanikwa kune mamwe mashoo. Gadziriro dzinofanira kuitwa vhiki mbiri pamberi pezvi.
Kuteerera zvishandiso izvo zvinowedzera zvinokwezva makwara eruzha anowanikwa kuCity Hall muMagic Kingdom, uye kuGuest Relations mune mamwe mapaki emusoro. Dhipoziti inodzoserwa ye $ 100 inodiwa. Mepu inotungamira mapaki icharatidza zvinokwezva zviri kutora chikamu.
Zvinyorwa zvakanyorwa zvinowanikwa pane zvakawanda zvinokwezva uye zvinoratidzwa. Kumbira mushandi weDisney kuti abatsirwe.
Dzinoratidza nemavhidhiyo zvinyorwa zvekushandisa zviripo pane zvimwe zvinokwezva. Tarisa mepu yekuperekedza mepu kuratidza chinokwezva chinotora chikamu.
SeaWorld Orlando inopa zvigaro zvakakosha munzvimbo dzese dzemitambo uye nhandare dzinoverengeka dzine masuo akakosha. Vaenzi vane imbwa dzinotungamira vanofanirwa kushandisa maitiro akafanana neaya hwiricheya vaenzi. Mvura inowanikwa kune imbwa dzinofambidzana chero paresitorendi nzvimbo.
[peji_title] Kune anobatsira dzimba dzekuzorora uye nhare dzakagadzirwa nemaoko akasimudzwa. mavhiripu inogona kubhadharirwa mari yezita uye huwandu hwemagetsi mavhiripu zviripo zvekurendesa pakutanga kuuya, kutanga kupihwa hwaro.
| SeaWorld Orlando Park Yekuwanikwa Nongedzo |
Yese Studios Orlando
Universal Studios Orlando inopa yakakosha Akaremara Guest Parking Pass kuti iratidzwe pane yako dashboard yekupaka mune yakakosha Akaremara nzvimbo yevaenzi yekupaka. Nguva dzose mavhiripu uye mota dzemagetsi dzinowanikwa mune mashoma huwandu pane yekutanga-kuuya, yekutanga-yakapihwa hwaro.
Vashanyi vane hurema hwekunzwa vanogona kuwana maTDD kuGuest Services Hofisi kana Hutano Services. Iwe unozoda kufona (407-224-4233) pamberi kuti uite gadziriso yemuturikiri. | Tsanangudzo ADA Ruzivo rweUniversal Orlando |
Unogona kutora kopi yeBhuku reNhungamiro yeVashanyi Vakaremara ku hwiricheya nzvimbo dzekurenda mupaki yega yega. Kuti uwane kopi pamberi, shanyira webhusaiti yeWDW pawww.kanoita.com kana kunyorera ku: Walt Disney World Guest Communications, Bhokisi 10000, Lake Buena Vista, FL 32830.
Vaya vakaremara vanogona kuzviwana vava mukana wekuda kubhadharisa michina kana kugadzirisa pavanenge vari pazororo. Kunyangwe urwu runyorwa rusina kukwana, runopa ruzivo kune dzimwe nzvimbo hombe uye dzinofamba nzvimbo dzeFlorida.
Zvinowanikwa Vans zveAmerica - Orlando & Zvimwe Rentals of kufambidzana maveni anofukidza Fort Myers, Pompano Beach neMiami. (Yemahara: 1-800-862-7475)
Chiito Kuremara Zviwanikwa - Jacksonville hwiricheya kufambidzana rendi mini-vans nezuva, vhiki, kana mwedzi. (Mutero Mahara: 1-888-316-2648)
Amigo Inofamba Center - Sarasota Rentals, kugadzirisa, zvikamu uye kutengesa. (Mutero Mahara: 1-800-783-2644)
KUCHENGETA Medical Equipment - Orlando Rentals, kugadzirisa, zvikamu uye kutengesa kwemanyorero uye mota mavhiripu uye anosimudza. Zvakare, vanopa zvekushandisa zvekurapa zvinosanganisira oxygen. (Mutero Mahara: 1-800-741-2282)
Randle Medical Kutengesa uye Rentals - Miami Mutsara uzere wezvigadzirwa zvekurapa zvekutengesa uye kutengesa. (Yemahara: 1-800-753-1222)
Kufamba kwaRandy - Orlando Kubhadhara kwemaoko uye mota mavhiripu kubva pamadhora 70.00 pasvondo zvichikwira. (Nhare: 863-679-1550)
Walker Kurapa uye Kufamba - Orlando Yakazara sevhisi yezvokurapa zvishandiso. (Yemahara Yemahara: 1-888-SCOOTER)
Wiricheya Vans yeAmerica - Clermont Rentals of kufambidzana mavhavha anofukidza Central Florida. (Yemahara Yemahara: 1-800-910-VANS
Ruzivo rwunopihwa naDawm Henthorn
[peji_title] [hr] Iyo Florida Keys uye Keywest Kuremara Ruzivo Ruzivo rweVashanyi vane kufamba Kuremara.
Zororo reFlorida Keys zvinoreva kupukunyuka kukuru kune imwe yenzvimbo dzakasarudzika pasi pano. Nzvimbo zhinji dzekugara, zvinokwezva uye zvekuvaraidza zvakagadzirirwa zvakanyanya kusimudzira kutora chikamu uye kunakidzwa kwevanhu vese, asi mune dzimwe nguva vashanyi vane kufamba kuremara kungangoda rubatsiro rwemunhu webato ravo kushandisa zvizere nzvimbo idzi.
Florida state zvirevo zvinoda ese marezinesi ekuvakira zvivakwa kuti ape angangoita mashanu% emakamuri evaeni aine vamwe vakaremara kufambidzana maitiro. Zvimiro zvinosiyana zvichienderana neyako hotera / nzvimbo yekutandarira yose runyorwa rweFlorida Keys pekugara, shanya www.rutoys.com/propsearch/accomloc.cfm uye sarudza nzvimbo yaungade kutsvaga.
Vashanyi vanokurudzirwa kuti vakurukure zvavanoda zvekuwanika pavanosangana nenzvimbo dzakananga.
Zvinonakidza & Nzvimbo Dzinofarira
Ndeipi pfungwa yako yekunakidzwa? Florida Keys zvinokwezva zvinokwanisa kuwanika kune vese vashanyi vedu kuteedzera kuda kwavo uye kunakidzwa nezvimwe zvinonyanya kuzivikanwa zveMakiyi: mvura yakanaka, hove yepasi rose uye mhuka dzayo dzesango uye zvisikwa zvemumvura zvakashata.
Chimwe nechimwe chedu chinokwezva chakagadzirirwa kupa kunakidza kune wese munhu, nevashandi vane hunyanzvi hwekuenderera mberi nekubatsira vashanyi nazvo kufamba kuremara; mazhinji akagadzirwa ne hwiricheya-kupinda mukati kana magedhi epamberi kuitira nyore kupinda.
Kiyi Largo inoratidzira matatu-dzimba yakaoma pa Jacobs Aquatic Center, ine 24'x44 ' ramp-kufambidzana multipurpose MYRTHA dziva (3-4 'rakadzika) rakagadzirwa nekusimudza uye rinoshandiswa kushambira makirasi, mvura maekisesaizi, aqua kurapa zvirongwa, uye kutandara. Kiyi West kembasi huru ye Florida Keys Nharaunda Koreji (FKCC) ine dziva rakasimudza-rakasimudzwa Jr. Olimpiki-yakakura dziva inowanzoitirwa nevadzidzi vanoshambira nhengo dzechikwata pamwe nekushandiswa senzvimbo yekutsvaira uye yekushambira yekushambira yakaoma.
Zvese zvikepe zveFlorida Keys zvekuredza zvinogona kutora hove dzakasiyana siyana - senge nyika yekumashure, husiku kana gungwa rakadzika - dzimwe ngarava, senge Key Largo's Runyararo Adventures, yakanyatsogadzirirwa mavhiripu, have kufambidzana dzimba dzekugezera, uye upe lift yekudzikisa Akaremara vatakuri mumvura isina kudzika yeiyo snorkeling uye yekushambira.
Islamorada inoratidzira chiratidziro pa Florida Keys Nhoroondo yeDiving Museuminonzi "Kutyaira Chiroto." Matt Johnston, weWoodbury, Minn., Akagadzira nhoroondo yekudonha munaNovember 2006 paakazove wekutanga akaoma mutezo scuba diver anofema kuburikidza nemhepo yose maviri akabudirira egungwa dive muFlorida Keys. Kuti uverenge zvakawanda nezve nyaya isingaenzaniswi yaMat, tinya pano.
Kana, iwe unogona kuda kusangana neswim kusangana kana kusangana nema dolphin; zvakazarakufambidzana uye zvakasikwa zvakakosha zvirongwa zvinoitwa kuti zviitwe nenzvimbo dzisiri-purofiti senge Key Largo's Chitsuwa Dolphin Kuchengeta Center naMarathon Dolphin Tsvagiridzo Center.
State uye mapaki emumvura mukati meKeyi kupa hwiricheya-kufambidzana nzira dzekuona shiri, uye girazi-pasi, snorkel uye kudhiraina zvikepe, uye mahombekombe mavhiripu yevaenzi, kusanganisira Curry Hammock State Park, Bahia Honda State Park uye John Pennekamp Coral Reef State Park. Kana zvichikwanisika, vashanyi vanofanirwa kutaura nepaki yega kuti vawane kana kuita chikumbiro pamhepo pa http://www.floridastateparks.org/ADA/RequestAccomodation.cfmusati washanya, kungo tarisira kuti pekugara uye / kana zvishandiso zvichawanikwa zvirinani paunosvika.
Dining Yedu yese maFlorida Keys maresitorendi akagadzirira kukugamuchira iwe munzvimbo dzedu dzoushamwari uye dzakadzoserwa nzvimbo dzekudyira. Mhando dzakasiyana dzezvinonaka zvitsva zvinowanika muKeys, kubva kuzvikafu zvegungwa zvemuno kusvika kune madhishi emadzinza uye nyama-yakavakirwa hunyanzvi.
For a yose kunyorwa kwenzvimbo dzese dzekudyira, shanya:
Veruzhinji, nzvimbo dzemitambo mukati meMakiyi ese ADA-kufambidzana, uine hwiricheya-kufambidzana zvigaro, pamwe nekupaka kwakanaka uye ramp kune vanhu vakaremara.
Seakakosha hunyanzvi uye zvetsika zviitiko zvine hurongwa uye kuwanikwa kunoitwa kune vanopinda nehurema, tichave tichizvitumira pano. Click pano nokuti yose kunyorwa kweArt & Tsika zviitiko.
Ground kutakura muchimiro chebhazi re shuttle rinowanikwa kubva kuKey West airport kuenda kunzvimbo mahotera. Kana nzvimbo yekugara isingapi shuttle yayo, panzvimbo yako vanogona kubata kambani yemunharaunda yematekisi inopa kufambidzana kutakura kungave pakati pehotera nendege kana kwaunoenda kuchitsuwa.
Kiyi West Taxi Matanhatu inopa Para Transit tekisi iyo inogona kugara zvese zviri zviviri zvemanyore kana zvemagetsi mavhiripu. Vatakuri vana vane vaviri mavhiripu, kana vashanu vafambi nemumwe hwiricheya unogona kuchovha zvakanaka. Vanopa zvemuno kutakura pamwe nekuenda kwese kuFlorida Keys.
Tinokukurudzira kuti usimbise zvakadaro kutakura nenzvimbo yako yekugara.
Zvekutenderera kuchitsuwa (s), veruzhinji uye kutenderera kutakura ne hwiricheya kuwana kunowanikwa, senge Conch Kushanya Chitima uye Kiyi West Trolley Kushanya. Guta reKiyi West rinopawo kufambidzana yeruzhinji bhazi. Click pano yehurongwa uye nerumwe ruzivo.
Zverwendo rwekare runonakidza uye rwakasarudzika, rwendo rwekufambisa ngarava pakati peKey West kusvika Sunset Kiyi uye kushanya kwezuva ku Yakaoma Tortugas mumwe nemumwe hwiricheya-kufambidzana.
Vashanyi vazhinji havangosvika muKeys chete pazvikepe zvengarava uye zvine mota, asi vanoda kushanyira edu mazhinji emvura marina. Kunyangwe paine zvisina kurongeka ADA nhungamiro yemakungwa, Guta reMarathon richangobva kugadzirira iyo Bhuti Key Harbor Guta Marina ine madoko anoyangarara uye kuwedzerwa kwekuenzana kuenzana kune ese marina masevhisi, anosanganisira echikepe chengarava, boardwalks uye nzvimbo dzekupaka.
[peji_title] Equipment Rentals
Scooter, bhuku mavhiripu, vanofamba, tsvimbo, mibhedha yechipatara, inotakurika okisijeni
Kunyangwe zvoga zvinokwezva kana mabhizinesi ekutengesa asina mavhiripu inowanika nyore kuti ishandiswe neruzhinji, izvi zvinogona kurendwa zuva nezuva kana vhiki nevhiki kubva kungove nenhamba shoma yenzvimbo muKeys. Pamari yekubhadhara, ruzivo rwekuisa, bata chero eaya masisitendi:
Coral Chiremba (Sweetwater Chiremba), Mile Marker 87.8, Islamorada, 305-852-4393
Nyeredzi Nyeredzi Dzimba, 5216 US1, Stock Island (Key West), 305-294-7171
Medical Care Services, Mile Chiratidzo 91.8, Tavernier, 305-501-2306
Inokurudzirwa kufamba neyako kana rent kana kuunza inodonha hwiricheya, kuve nechokwadi chekuwanika panguva yekugara kwako pamwe neye nyore trunk stowage uchityaira uchitenderera zviwi.
[peji_title] Mashoko Ekuenda
Iyo Florida Keys & Key West Yekushanya Kanzuru yeKanzuru
PO Bhokisi 866 Key West, FL 33041 800-FLA-KEYS (352-5397) http://www.fla-keys.com
Florida Keys Visitor Center / Key Largo Chamber of Commerce 106000 Overseas Highway Key Largo, FL 33037 800-822-1088 / (305) 451-1414 http://www.keylargochamber.org
Islamorada Chamber of Commerce 83224 Overseas Highway Islamorada, FL 33036 800-322-5397 / (305) 664-4503 http://www.islamoradachamber.com
Marathon Chamber of Commerce 1222 Overseas Highway Marathon, FL 33050 800-262-7284 / (305) 743-5417 http://www.floridakeysmarathon.com
Yakadzika Keys Chamber of Commerce MM31 / Overseas Highway Big Pine Key, FL 33043 800-872-3722 / (305) 872-2411 http://www.lowerkeyschamber.com
Chinokosha West West Chamber of Commerce 402 Wall Street Key West, FL 33040 800-872-3722 / (305) 872-2411 http://www.keywestchamber.org
Florida Keys Council Yevanhu Vakaremara http://www.monroecounty-fl.gov/index.aspx?nid=316 MaKiyi ezasi (305) 292-4500 Middle Keys (305) 743-0079 ext. Makiyi Ekumusoro e4562 (305) 852-1469 ext. 4562
Kukwanisa Kuvimba inopa zvinongedzo zvinobatsira ku Kuremara zviwanikwa mudunhu rese reFlorida. Bata yakananga pa888-838-2253
[peji_title] Akaremara Kunze Sangano yakatsaurirwa kuvandudza iyo unhu yehupenyu hwevanhu vakaremara uye kusimudzira mikana yekuvaraidzwa kwekunze. Bata kune rumwe ruzivo 850-201-2944
http://www.fdoa.org/home/contact-us Sosaiti ye kufambidzana Kufamba uye Kugamuchira Vaeni (SATH) inopa kurudziro uye zviwanikwa zvevamiriri vekufamba uye kubatsira vafambi vakaremara kuronga zororo ravo. Bata yakananga 800-513-1126 http://www.sath.org
[peji_title] Mutengesi Locator
Kuti uwane mupi wekutengesa munzvimbo yako, ndapota TAURA NESU pa1-800-80-KARMA (1-800-805-2762) apo mumwe wevatinoshamwaridzana nevatengi vevashandi achasarudza kubva pamusoro pevatengesi vanopfuura zviuru zvitanhatu uye ndokupa iwe kumutengesi ari padhuze newe neyekuverenga iyo inonyatsoenderana nechigadzirwa iwe chaunofarira kwazvo. kutsvaga uye tichaita zvatinogona kuti tiwane uye / kana kukurudzira kwauri. Karman Healthcare inotora kudada kukuru nebasa redu uye vatengesi vanobatirana vanonyatso chengetedza chigadzirwa chedu.
Tenga Pamhepo kubva [peji_title]
Ungada here kutenga online? Tine huwandu hwakawanda hwevatengesi vepamhepo vakagadzirira kukubatsira iwe kuti uwane chigadzirwa chakanakira zvako zvese zvaunoda. Dzimwe nzvimbo dzepa internet dzinopa YEMAHARA 2 zuva kutumira *, ruzivo rwakagadzirirwa basa, uye / kana yekutanga kirasi marongero ekugutsa zvaunoda. Vamwe vanotopa mari nemari zero muzana mubereko *! Karman anodada kuva nevatengesi vedu Vakabvumirwa kunyorwa mune yedu sevhisi network kuvandudza ruzivo rwekutenga mukutsvaga vakakwana kufamba chigadzirwa. Kana iwe uchida rubatsiro kuti uwane iyo yepamusoro mutengesi kune ako chaiwo zvaunoda, ndapota usazeze kuti utitane nesu kutanga. Ndatenda!